Iyo yakakwidziridzwa simbi mesh inogona kuganhurirwa mumhando dzakasiyana siyana maererano nekushandisa kwayo, senge yakakwirira-kukwirisa chikuva chinokambaira, mechiniki inodzivirira mabutiro, makuru emigwagwa, njanji njanji, hwaro gomba mutserendende kudzivirirwa, kushongedzwa kwemukati, siringi siringi, michina ...
Stainless simbi mesh ruzivo rwakabatana
Isimbi isina waya waya mesh parizvino ndiyo inonyanya kufarirwa, inoshandiswa zvakanyanya, uye hombe simbi waya mesh pamusika. Iyo inowanzo kunzi simbi isina simbi mesh inonyanya kureva simbi isina simbi yakarukwa mesh. Chekutanga pane zvese, ngatinzwisise kufurira kweanoverengeka main elem ...
Kune mhando dzakasiyana dzemadziro uye dzakasiyana mbishi zvigadzirwa. Nderupi fenzi rwakakodzera iwe? Naizvozvo, isu tinofanirwa kunzwisisa mhando uye hunhu hweanowanzo shandiswa mambure efenzi, kuti tikwanise kusarudza kwedu kushandisa. Tevere, hanzvadzi yekuchengetedza ichataura nezve mhando uye hunhu ...